MY BABY’S CHOICE TIKTOK ပြိုင်ပွဲလေးတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါပြီ - Chelmo News Portal
Home›Exclusive›MY BABY’S CHOICE TIKTOK ပြိုင်ပွဲလေးတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါပြီ
->My Baby Choice TikTok ဗွီဒီယိုပြိုင်ပွဲ ကို မေလ (၃၁) ရက်နေ့ မှ ဇွန်လ(၂၁)ရက်နေ့ ၂၀၂၀ အထိကျင်းပပါမယ်။
->ဆုရရှိသူများကို ဇူလိုင်လအတွင်း ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…
၁)ပြိုင်ပွဲဝင်ရမယ့်သူက ကိုယ့်ရဲ့ Tik Tok Account မှာ တင်ဖို့အတွက် My Baby’s Choice သီချင်းလေးကို MamyPoko Myanmar ရဲ့ Tik Tok -> https://vm.tiktok.com/KxkWM9/ မှာရှာပြီး ဆော့ရပါမယ်။ ဖန်တီးရမယ့် TikTok Video လေးကတော့ Mommy Pan ကဖန်တီးထားတဲ့ ယခု TikTok Video လေးပါ။
Mommy Pan ရဲ့ TikTok Account https://www.tiktok.com/@panandlittlekim မှာလည်းဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဖေဖေ / မေမေ တို့ဖြင့် သားသား/မီးမီး တစ်ဦးစီက MamyPoko (သို့) MyBaby Diaper လေးဝတ်ဆင်ပြီး Diaper အထုပ်ပုံပါအောင် ရိုက်ကူးယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါနော်။ဗီဒီယို ဖန်တီးချိန်မှာ ယိုစိမ့်ခြင်း၊ စိုစွတ်ခြင်း၊ ပူလှောင်ခြင်း ဆိုသော Keyword (၃)ခုကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းဖန်တီးရပါမည်။
Mammy Pan ဖန်တီးထားတဲ့ ဗီဒီယိုကတော့ ….
? My Baby’s Choice TikTok Campaign ?
MamyPoko ချစ်သူလေးတွေအတွက် Tik Tok ဆော့ရင်း ဆုလေးတွေရမယ့် အစီအစဉ်လေးလာပါပြီ။ ?ပြိုင်ပွဲကာလ?? My Baby"s Choice TikTok ဗွီဒီယိုပြိုင်ပွဲ ကို မေလ (၃၁) ရက်နေ့ မှ ဇွန်လ(၁၄)ရက်နေ့ ၂၀၂၀ အထိကျင်းပပါမယ်။? ဆုရရှိသူများကို ဇွန်လ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…? ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံအဆင့်ဆင့်?၁)ပြိုင်ပွဲဝင်ရမယ့်သူက ကိုယ့်ရဲ့ Tik Tok Account မှာ တင်ဖို့အတွက် My Baby’s Choice သီချင်းလေးကို MamyPoko Myanmar ရဲ့ Tik Tok -> https://vm.tiktok.com/KxkWM9/ မှာရှာပြီး ဆော့ရပါမယ်။ ဖန်တီးရမယ့် TikTok Video လေးကို Mommy Pan ရဲ့ TikTok Account https://www.tiktok.com/@panandlittlekim မှာလည်းဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဖေဖေ / မေမေ တို့ဖြင့် သားသား/မီးမီး တစ်ဦးစီက MamyPoko (သို့) MyBaby Diaper လေးဝတ်ဆင်ပြီး Diaper အထုပ်ပုံပါအောင် ရိုက်ကူးယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါနော်။ဗီဒီယို ဖန်တီးချိန်မှာ ယိုစိမ့်ခြင်း၊ စိုစွတ်ခြင်း၊ ပူလှောင်ခြင်း ဆိုသော Keyword (၃)ခုကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းဖန်တီးရပါမည်။ ၂) ပြိုင်ပွဲဝင် Tik Tok Video ကို Tik Tok Account နှင့် Facebook မှာ (#MyBabysChoice #PremiumExtraDry #MamypokoMyanmar) လို့တွဲပြီး Public နဲ့တင်ရပါမယ်…Facebook Account မှာ ပြန်တင်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်း မေမေ ၃ ယောက်ကို Tag တွဲပေးဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။၃) တင်ပြီးရင် ကိုယ့် Facebook Account မှာတင်ထားတဲ့ Tik Tok Video လေးကို Screen Shot လုပ်ပြီး အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အတူ MamyPoko Message Box ရှိ “TikTok Videoပို့ရန်” Chat Box သို့လာပို့ရပါမယ်။? ရွေးချယ်မည့်ပုံစံ ?Step-1-ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံနှင့် ကိုက်ညီသူများထဲမှ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့်(၅၀)ဦးကိုရွေးချယ်ပြီး ပြိုင် ပွဲပြီးဆုံးချိန်တွင် MamyPoko Myanmar Facebook Page တွင်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။Step-2-နောက်ဆုံးအဆင့် (၅၀)ဦးအတွင်းမှ …? My Baby’s Choice Award (၉)ဦး – MamyPoko Extra Dry Skin အထုပ်ကြီး (၁)ထုပ် + အရုပ်တဲအိမ်(၁)လုံး? Most Reaction Award (၁) ဦး – Like & Share အများဆုံးဆု – MamyPoko Extra Dry Skin အထုပ်ကြီး (၁)ထုပ် + အရုပ်တဲအိမ်(၁)လုံး ကိုချီးမြှင့်ပေးသွားမှာပါ။မှတ်ချက်။ ။ Like & Share (Reaction) အများဆုံး တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ရွေးချယ်သွားမှာမို့လို့ ကိုယ့်ရဲ့ Video ကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အဆန်းသစ်ဆုံး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပေးရမှာနော်။၊? ပြိုင်ပွဲဝင်စည်းကမ်းချက်များ ?? မွေးကင်းစမှ(၃)နှစ်အတွင်း သားသားမီးမီး ကလေး(၁)ဦးနှင့်၊ ဖေဖေ / မေမေ နဲ့ဖြစ်စေ၊ TikTok ကို ဖန်တီး၍ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ လိုက်နာရမယ့်အချက်ကတော့ သားသား၊မီးမီးလေးတို့က MamyPoko (သို့မဟုတ်) MyBaby Diaper ကိုဝတ်ဆင်ပြီး Product အထုပ် ပါဝင်အောင် ရိုက်ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်။? ပြိုင်ပွဲဝင်(၁)ဦးလျှင် မိမိစိတ်တိုင်းကျ TikTok Video ကို (၁)ကြိမ်သာပို့ပြီး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာနော်။(အကြိမ်ကြိမ်ပေးပို့လာခြင်းဖြစ်စေ၊ အခြားသောသူများမှ တဆင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့လာသောပြိုင်ပွဲဝင်TikTok Video များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ)?ဖုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးထားခြင်းမရှိသော TikTok Video များ၊ ညစ်ညမ်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ? ယှဉ်ပြိုင်သူသည် votes အတုများ အသုံးပြုထားပါက သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် မညီညွတ်ပါက ပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။? ပြိုင်ပွဲဝင်ကာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ကိစ္စရပ်များကို ပြိုင်ပွဲဝင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်တွင် မူတည်၍ MamyPoko Myanmar ၏ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါမည်။? မြန်မာပြည်တွင်း၌ နေထိုင်သူများသာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိင်မည်ဖြစ်ပြီး MYCARE Unicharm မိသားစုများအား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။ကဲ…..အားလုံးပဲ My Baby’s Choice TikTok Campaign လေးမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကခုန်ရင်း ကံထူးနိုင်ကြပါစေရှင့်။
Gepostet von MamyPoko Myanmar am Samstag, 30. Mai 2020
၂) ပြိုင်ပွဲဝင် Tik Tok Video ကို Tik Tok Account နှင့် Facebook မှာ (#MyBabysChoice #PremiumExtraDry #MamypokoMyanmar) လို့တွဲပြီး Public နဲ့တင်ရပါမယ်…Facebook Account မှာ ပြန်တင်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်း မေမေ ၃ ယောက်ကို Tag တွဲပေးဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။
၃) တင်ပြီးရင် ကိုယ့် Facebook Account မှာတင်ထားတဲ့ Tik Tok Video လေးကို Screen Shot လုပ်ပြီး အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အတူ MamyPoko Message Box ရှိ “TikTok Videoပို့ရန်” Chat Box သို့လာပို့ရပါမယ်။
ဗီဒီယိုလေးကို ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကို အောက်က လမ်းညွှန်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
? My Baby’s Choice TikTok Campaign – How To Make Video ?
My Baby’s Choice TikTok Campaign – How To Make Video လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ မေမေတို့ Video လေး ဖန်တီးချိန်မှာ ဘယ်လိုဖန်တီးရမှာလဲဆိုတာကို အဆင့်ဆင့် ဖော်ပြထားပါတယ်။ နောက်ပြီး ပြိုင်ရမယ့် တဆင့်ချင်းစီကိုတော့ 1st Comment မှာ အသေးစိတ် ရေးထားပါတယ်ရှင်။#MyBabysChoice #PremiumExtraDry #MamypokoMyanmar
Gepostet von MamyPoko Myanmar am Montag, 1. Juni 2020
ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံနှင့် ကိုက်ညီသူများထဲမှ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့်(၅၀)ဦးကိုရွေးချယ်ပြီး ပြိုင် ပွဲပြီးဆုံးချိန်တွင် MamyPoko Myanmar Facebook Page တွင်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအဆင့် (၅၀)ဦးအတွင်းမှ …
->My Baby’s Choice Award (၉)ဦး – MamyPoko Extra Dry Skin အထုပ်ကြီး (၁)ထုပ် + အရုပ်တဲအိမ်(၁)လုံး
-> Most Reaction Award (၁) ဦး – Like & Share အများဆုံးဆု – MamyPoko Extra Dry Skin အထုပ်ကြီး (၁)ထုပ် + အရုပ်တဲအိမ်(၁)လုံးး ကိုချီးမြှင့်ပေးသွားမှာပါ။
မှတ်ချက်။ ။ Like & Share (Reaction) အများဆုံး တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ရွေးချယ်သွားမှာမို့လို့ ကိုယ့်ရဲ့ Video ကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အဆန်းသစ်ဆုံး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပေးရမှာနော်။၊
၁)မွေးကင်းစမှ(၃)နှစ်အတွင်း သားသားမီးမီး ကလေး(၁)ဦးနှင့်၊ ဖေဖေ / မေမေ နဲ့ဖြစ်စေ၊ TikTok ကို ဖန်တီး၍ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ လိုက်နာရမယ့်အချက်ကတော့ သားသား၊မီးမီးလေးတို့က MamyPoko (သို့မဟုတ်) MyBaby Diaper ကိုဝတ်ဆင်ပြီး Product အထုပ် ပါဝင်အောင် ရိုက်ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂) ပြိုင်ပွဲဝင်(၁)ဦးလျှင် မိမိစိတ်တိုင်းကျ TikTok Video ကို (၁)ကြိမ်သာပို့ပြီး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာနော်။(အကြိမ်ကြိမ်ပေးပို့လာခြင်းဖြစ်စေ၊ အခြားသောသူများမှ တဆင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့လာသောပြိုင်ပွဲဝင်TikTok Video များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ)
ဖုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးထားခြင်းမရှိသော TikTok Video များ၊ ညစ်ညမ်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၃) ယှဉ်ပြိုင်သူသည် votes အတုများ အသုံးပြုထားပါက သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် မညီညွတ်ပါက ပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၄) ပြိုင်ပွဲဝင်ကာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ကိစ္စရပ်များကို ပြိုင်ပွဲဝင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်တွင် မူတည်၍ MamyPoko Myanmar ၏ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါမည်။
၅)မြန်မာပြည်တွင်း၌ နေထိုင်သူများသာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိင်မည်ဖြစ်ပြီး MYCARE Unicharm မိသားစုများအား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။
ကဲ…..အားလုံးပဲ My Baby’s Choice TikTok Campaign လေးမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကခုန်ရင်း ကံထူးနိုင်ကြပါစေရှင့်။